5 Fanesoana Balloon mahafinaritra | Famoronana an-tserasera
Fran Marin | | Graphic Design, Photoshop
izy dia ny toe-javatra iorenantsika ny hafatray dia manan-danja mitovy amin'ny hafatra ampitaintsika manokana. Misy haino aman-jery tsy tambo isaina izay ahafahantsika misambotra ny volavolaintsika ary matetika ireo haino aman-jery ireo dia afaka manampy antsika hanatsara ny hafantsika na hanome azy ireo nuansa vaovao mihitsy aza. Ity no mitranga amin'ny loharano izay entiko ho anao anio: fonosana misy fanesoana balaonina. Amin'ity modely ity dia azontsika atao ny mampifangaro ny logo sy ny teny fanevanay amin'ny balaonina miaraka amin'ny tena zava-misy. Na dia tsy loharanom-pahalalana maimaimpoana aza izany dia heveriko fa miankina amin'ny tetikasa iza (toa ny doka na pejy web) no mety. Ao anatin'ity fonosana ity modely dimy no tafiditra miaraka amin'ny balaonina samy hafa amin'ny toerana samy hafa sy amin'ny loko samihafa (na dia efa fantatrao aza fa ny loko dia azo ovaina mora foana amin'ny fampiharana toy ny Adobe Photoshop). Ny rakitra tsirairay dia ao Endrika PSD ary izy ireo dia voaforon'ny zavatra marani-tsaina izay mora sy haingana be hanoloana ny atin'ny balloons. Ho fanampin'izay, ny sary tsirairay dia misy vahaolana avo lenta, amin'ny maody miloko RGB ary misy piksela 300 isaky ny santimetatra (izany hoe 3500 teboka amin'ny 2332 teboka). Araka ny hitanao, ny kalitaon'ny modely dia tena tsara ary ny fampidirana ny sary dia tena zava-misy.
Aiza no ahitanao izany fanesoana mahafinaritra izany? Avy amin'ny pejy Graphicriver (Envato) amin'ny vidiny enina dolara. Ny fonosinay dia misy fitaovana fanampiana ho anao izay vaovao amin'ny fampiasana ireto karazana fitaovana ireto (na dia eny, tonga amin'ny teny Anglisy ireo torolalana ireo saingy efa nolazaiko anao fa tsotra be izany).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Mockup Balloon mahafatifaty 5
131322 dia hoy izy:
Valio ny 131322
Lavorary izy ireo